Antenimierandoholona :: Mihemotra ny fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny toaka gasy • AoRaha
Nahemotra amin’ny fotoana tsy mbola voafetra ny fanatontosana ny fivoriana azon’ny besinimaro atrehina tokony hankatoavana na tsia an’ilay tolo-dalàna mifehy ny fivarotana an-kalalahana ny toaka gasy eny amin’ny Antenimieran-doholona. Nandritra ny fivoriam-baomiera natao ny alarobia 12 mey 2021 no nanapahana an’io fampihemorana io.
« Tsy feno ny fepetra hahafahana mandinika sy mankato ny tolo-dalàna ao amin’ny Antenimieran-doholona amin’ny talata izao, araka ny efa voafaritra ao anatin’ny lahadinika », hoy ny filoha lefitry ny Antenimieran-doholona misolo tena ny faritany Avaratra, Imbiky Herilaza tamin’ny antso antariby omaly.
Fantatra fa maro ireo pitsopitsony ilàna ny hevitr’ ireo teknisiana avy amin’ireo minisitera niaraka namolavola an’ity tolo-dalàna ity, ka izay no antony tsy hahafahana mandinika sy mankato azy. Tsiahivina fa ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena misolo tena ny faritanin’i Fianarantsoa, Brunel Razafintsiandraofa izay namolavola azy ihany no nanatrika ny fivoriam-baomiera teny amin’ny lapan’Anosikely. « Tokony nandray anjara tao, ohatra, ny solontenan’ny minisiteran’ny Fahasalamana, ny avy amin’ny Fitsinjaram-pahefana, ary ny Fitsarana saingy tsy tonga izy ireo nahemotra ny fivoriam-baomiera », hoy ihany ny loholona Imbiky Herilaza.
Fampihenana ireo voafonja Nandidy ny hanafainganana ny raharaham-pitsarana ny minisitra
Fitaterana an’habakabaka :: Voafaritra ny sokajin’olona afaka mivoaka sy miditra eto Madagasikara
Fanavaozana ny asam-panjakana :: Hofehezin’ny fepetra manokana ny fandraisana mpiasa vaovao